Alaotra: tsy mividy makalioka ny mpanangom-bokatra | NewsMada
Alaotra: tsy mividy makalioka ny mpanangom-bokatra
Par Taratra sur 29/01/2019
Sanganehana ny mpamoka-bary any Alaotra amin’izao fotoana izao. Tsy misy mandray ny vary akotry Makalioka ! Ny vary Dista ihany no raisin’ireo mpanangom-bokatra rehetra. “ “Ampahany kely hamenoana fiara sisa no raisin-dry zareo, raha mividy karazam-bary hafa , toy ny Makalioka no mbola ambany ny vidiny”, hoy ny tarainan’ireo mivelona amin’ny famokaram-bary sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy nisamboram-bola, any amin’iny faritra lazaina sompitra voalohan’ny firenena.
Marihina fa 30 ka hatramin’ny 40 ireo fiara vaventy feno vary akotry no mandoa tamberim-bidy, araka ny filazan’ireo mpiambina eny amin’ny sakana fitakiana izany. Betsaka ny fanazavana, fa ny be mpiresaka indrindra ny hoe ny Amerikanina, hono, no tena mila io karazam-bary Dista io. Sahy mividy lafo ry zareo mpanangona. Izany no mahatonga izao toe-javatra izao. Tsorina anefa fa ny Makalioka ihany no mbola mety amin’ny mpamboly any an-tsihanaka na misy ny Dista sy ny karazam-bary hafa, toy vary Bota, ohatra.
Fatiantoka hafa, mbola midina indray ny vidin’ny Makalioka andraisan’ny mpanangom-bokatra ny varin’ny tantsaha. ”Efa tafakatra 1 100 Ar ny kg teo, izao lasa midina 1 080 Ar indray”, hoy ireo tantsaha. Fotoana hanokafana ireo tahirim-bokatra niandrasana ny vidin’akotry mba ho ambony anefa izao, saingy vao mainka ambany vidy amin’izao. Sahirana ireo mpamboly mamerina ny vola nosamborina tao amin’ny Cecam, Otiv, Microcred, sns.